Top 3 Solar Mistakes Made by Solar Installers - Kimroy Bailey Group
MISAOTRA AN'ILAY GROUP GR|
Mikasika ny tarika KB
Blog Center & Resource Center
Ny tarika KB
Serasera Global KB
Oniversite Trott Bailey
Pro Hub - Misoratra anarana
Oniversite Trott Baileyfironana
Fahadisoam-pahefana farany ambony nataon'i Solar installers
Angovo azo havaozina, Featured
Zarao amin'ny tarika KB ny sakaizanao
Tao anatin'ny dimy taona naharetan'ny masoandro dia nanao hadisoana be aho nandritra ny diako hamelomana ny orinasam-pananganana masoandro any Kimroy Bailey Renewables. Te hanampy anao aho hamonjy ny làlan'ny fianarana mianatra haingana kokoa noho ny nataoko ary izany no antony namoronanay ny Dingana amin'ny dingana fampiofanana momba ny fametrahana Solar manampy anao am-pahatokiana ny fametrahana rafitra tontolon'ny masoandro mahasoa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanasongadinana hadisoana telo rookie solar aho izay mazàna apetraka am-boalohany amin'ny orinasan'izy ireo.
Fahavitan'ny masoandro # 1: Mamela vola eo ambony latabatra
Rehefa mivezivezy amin'ny orinasan'ny masoandro ianao dia naka-panitra anao hanolotra vidiny mora kokoa noho ny mpifaninana aminao. Na izany aza, aorian'ny 5 taona amin'ny orinasa, afaka milaza aminao aho fa ity dia miasa ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy handondòna anao aho amin'ny fanaovana azy miketrika eo am-baravarana fa tsy fomba ahitam-bokatra ho an'ny fampandrosoana ny orinasanao.
Tokony ho rariny amin'ny mpanjifanao ianao nefa mila miantoka koa ianao fa mitovy ny tombom-bararanao hahazoany miasa amin'ny asanao. Nahavita fametrahana betsaka izay nahitako sorona ny fanonerana ny tenako mba handrakofana ny mpiasa sy ny fandaniam-bola. Ankoatr'izay, raha mandoa vola roa ny mpanjifanao, ataovy azo antoka fa ny fametrahana voalohany dia ampy handrakofana ny sandan'ny fitaovana, ny fitaovana ary ny contingencies ary ny fametrahana farany dia tokony handray anjara amin'ny vidin'ny asa sy ny vola / orinasa amin'ny asa. Miasa amin'ny 70% eo ho eo ny fametrahana voalohany ary 30% amin'ny fametrahana farany. Ny mpanjifa sasany dia mety hanantitrantitra 50% voalohany ary 50% rehefa vita, amin'izany dia miantoka fa manana ny famoronana enti-miasa amin'ny masoandro ianao na ny fidirana aty an-drenivohitra haka ireo entana tsy voarakitra ao anatin'ny fandoavana ny vola voalohany satria tsy azo atao ny 50%. handrakotra ireo fitaovana avy amin'ny masoandro, fitaovana ary asa any ivelany.
Kilema momba ny masoandro # 2: Fandresena na fanaovana antena tsy ampoizina amin'ny mpanjifa
Hihaona amin'ireo mpanjifa marobe izay maniry ny lakolosy sy ny karavasy ianao nefa tsy manana teti-bola. Ny asanao amin'ity sehatra ity dia tena mazava amin'ny fifandraisanao amin'ny mpanjifa momba ny fahafahan'ny rafitra herin'ny masoandro. Inona no tena tiako holazaina? Hanome ohatra ho anao aho: Manamboatra rafitra ivelany tsy misy takelaka ho an'ny mpanasa sy mando miaraka amin'ny fihinanana kWh manokana ianao. Miankina amin'ny asa ny fanavaozana ny mpanjifa ho lasa mpanasa sy mpanamory lehibe kokoa miaraka amin'ny fiandrasana fa mbola afaka mihazakazaka ny entana ianao raha ny rafitra efa nifanekena. Na rehefa nahavita asa ianao ary nanolotra subpanel an'ny herinaratra miaraka amin'ireto fitaovana rehetra ireto izay naterina hatramin'ny masoandro, ny mpanjifa dia manamboatra elektrisianina iray na namana iray hametaka fitaovana fanampiny ho an'ny rafitra.
Ny tendako dia ny hifampiresaka mazava sy hiantohana fa manana solosaina avokoa ianao sy ny fanovana rehetra nangatahan'ny mpanjifa voarakitra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny tolo-kevitra mifanaraka amin'ny solar, fifanarahana efa vita sonia, resaka mailaka / resadresaka facebook sns.
Fahavitan'ny masoandro # 3: Fandaminana ratsy
Amin'ny maha-vaovao anao amin'ny sehatry ny fametrahana, ny tanjonao dia ny ho lasa mahomby araka izay azo atao miaraka amin'ireo loharano voafetra izay anananao. Ireo faritra lehibe tokony hanananao tsara dia logn'ny mpikambana ao amin'ny ekipa (na ekipa roa-na mihoatra aza) -Inona no tompon'andraikitra? Ny faritra manaraka dia ny fanaterana sy fitehirizana ny vatan-javaboary-hazavana sy ny fitaovana hafa ary tsara dia lehibe, manana ireo an-toerana ireo ny andro alohan'ny tena manampy ny fametrahana. Farany manana fitaovana mety miasa toy ny satroka mafy, harness, fehikibo momba ny fitaovana, drill, hydrometrika sns.
Tsindrio raha hitaky Disk% 54% amin'ny Dingana nataon'i Step Solar Course
Ny tenda iray tiako hotolorana azy ary ny fampiasako ny raharahako dia ny fiomanana mialoha ny singa amin'ny masoandro. Ny singa avy amin'ny masoandro toy ny inverter, boaty fifandraisan-doha, boaty fifandraisana DC (mivantana), circuit breakers ary mpiaro ny fivontosana dia mifandray amin'ny birao alohan'ny handehanany any amin'ny tranon'ny mpanjifa. Avy eo napetrako ao anaty boaty milamina ireo singa ireo izay mety hivezivezy haingana amin'ny rindrina. Hitako ihany koa matetika fa ny tompon-trano dia mety misy asa hafa atao ao an-tranony rehefa mihevitra ny masoandro izy ireo. Raha misy asa elektrika tanterahana mandritra ny fotoana anakaranao anao hametraka ny masoandro, alao ny herinaratra hitantana ny tariby mifanaraka amin'ny herin'izy ireo. Eh, hanao toy izany ihany koa izy ireo na tsy misy solosainao.
Tena faly aho rehefa afaka mizara ireo hevitra ireo sy ny toro-hevitra amin'ireo mpianatsika amin'ny Step by Step Solar. Misy torohevitra feno fahendrena hoe:raha miara-dia amin'ny hendry ianao, dia tonga hendry. Amin'ny maha-rookie ahy dia mila mianatra lesona maro avy amin'ny traikefa sarotra aho indrindra satria ny indostrian'ny fametrahana ny masoandro dia mbola tanora ary tsy manara-penitra. Afaka mandoka votoaty mahatsiravina be loatra ianao amin'ny endrika lahatsary rehefa misoratra anarana ao amin'ny Dingana vita amin'ny dingana fampiofanana momba ny fametrahana an'i Solar. Ity fampianarana ity dia hiantoka fa hitsambikina ny sakana amin'ny fitsapana sy ny hadisoana ianao ary ho tonga amin'ny ampahany tsara amin'ny fametrahana amim-pahatokisana ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro.
Misaotra anao nanokana fotoana hamakiana ity lahatsoratra ity. Aza misalasala mizara ny eritreritrao amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Ity no #TeamKB Andao isika #KeepBelieving
Facebook Twitter LinkedIn karazana verinia
Kimroy Bailey dia tompon'ny Multibillionaire ao amin'ny Trott Bailey Family Group of Company sy ny orinasa rehetra. Izy dia hubby Sher Trott Bailey ary dadan'ny andriana Keilah Trott Bailey. Ny tsipika ankafiziny dia #TeamKB, #KeepBelieving
31Oct Oktobra 31, 2016
Fametrahan-jiro an'ny solosaina DIY Tutorial DIY!
Ity lahatsary ity no voalohany amin'ny andiany amin'ny torolalana DIY torolalana momba ny fametrahana takelaka solar amin'ny rindrina mivaingana ... hamaky bebe kokoa
18Oct Oktobra 18, 2012
Ny tafio-drivotra sy ny tafio-drivotra mahery vaika
Ny mpikarakara ny fihaonambe IEEE Global Humanitarian Conference 2012 dia nanokatra fampiharana ho an'ny mpianatra hametraka ny fikarohana momba ny maha-olona azy ... hamaky bebe kokoa
03Mar March 3, 2013
Famatsiam-bola amin'ny sehatry ny fiompiana an-dranomasina any ivelany
Ny vola avy amin'ny tetikasa LNG tsy nahomby vao haingana izay azo erahana dia mitentina 602 tapitrisa dolara amerikana azo ampidirina ... hamaky bebe kokoa
08Mey Enga anie 8, 2013
Fahazavana avoakan'ny rivotra Turbine Wind, hevitra avy amin'i TAK Studio #TeamKB, Ity misy fanavaozana tena mahaliana ary antony iray hafa amin'ny #KeepBelieving ... hamaky bebe kokoa
02Mey Enga anie 2, 2013
Wigton dia manangana $ 1 miliara amin'ny tombony azo
Wigton Wind Farm Jamaica Ltd, toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra amin'ny Anglisy miteny Karibeana dia efa namina 1 tapitrisa dolara tao ... hamaky bebe kokoa
20Apr Aprily 20, 2013
Jamaica Alternative Energy Expo
Kimroy Bailey ao amin'ny Jamaika Renivable Energy Expo izay natao tao amin'ny Jamaica Pegasus 2013 ny alatsinainy 15 aprily 2013. hamaky bebe kokoa
20Nov Novambra 20, 2013
Kimroy Bailey Foundation dia nitondra robotika ho any ambany renirano
Carl Gilchrist, mpanoratra Gleaner LOWE RIVER, Trelawny: INDRINDRA amn'ireo zaza am-polony mavitrika ao amin'ny renirano Lowe sy ny manodidina azy ao ... hamaky bebe kokoa
30Mar March 30, 2013
Blackout Blackout! Azo itokisana ny fanavaozana 100%
Ny sabotsy 30 martsa mihoatra ny 90% amin'ireo mpanjifa 600,000 ao amin'ny orinasa Jamaica Public Service dia niaritra ora maro ... hamaky bebe kokoa
20Sep Septambra 20, 2013
Gleaner: KB Foundation 100% Ivotoerana Community Community Renewable
ITY lesona iray amin'ny fisian'olombelona. Manana mari-pahaizana momba ny injeniera avy amin'ny University of Technology (UTech), Kimroy Bailey ... hamaky bebe kokoa
19Jan Janoary 19, 2014
13 Pics: tsara indrindra amin'ny KB 2013!
Kimroy Bailey tamin'ny taona 2013 raha jerena, eto ambany ny lisitr'ireo zava-bita, tsy laharana misy amin'ny alàlan'ny ... hamaky bebe kokoa
Ny diako University
Fizarana 1 Dingana an-dàlam-pianarana fananganana fanaovan-trano amin'ny Solar Panel ho an'ireo vao manomboka
Mahazo manana rivotra ve ny lehilahy? Ahoana ny fanakanana ny indostrian'ny solika eo amin'ny robotic wind
Jolay 30, 2018
3D Printer 100% Jamaika azo havaozina 100% Mpitoraka bilaogy Jamaikana 2012 fanolorana mari-pankasitrahana Bailey volavolan-dalàna caribbean energy caribbean sea sy angovo azo havaozina Community Conservation fanitarana loharanom-angovo ao amin'ny caribbean Energy fikajiana angovo Fanentanana momba ny tontolo iainana Foundation Fahombiazana eo amin'ny sehatra Jamaika Volavolan-dalàna angovo nataon'i Jamaika Jamaica Blog Awards Krizy amin'ny angovo any Jamaika Ny fanafarana solika any Jamaika Serivitim-panjakana any Jamaika Kimroy Kimroy Bailey Kimroy Bailey Foundation eny ivelan'ny tanimbary miala amin'ny gorodona Loka nomen'ny tanora praiminisitra Fanafody azo havaozina azo havaozina Angovo azo havaozina Fanavaozana Jamaika Robotics Resadresaka Smile Jamaica Solar masoandro angovo tontonana solar SAMPA The Kimroy Bailey Foundation University of Technology Alumni Ekipa Utech Robotics Wind Angovo avy amin'ny rivotra turbine rivotra rivotra turbines
INDRINDRA MBOLA ALOHA
Misoratra anarana ary alao ny fampahafantarana farany indrindra momba ny Fanavaozana Robotics Industry Plus Sales sy Offers avy amin'ny vondrona KB.
200 S Biscayne Blvd, Miami, 33131, Etazonia
INONA NO ATAO: Text, feo & horonan-tsary
Chat Instant Chat eto IZANY!
Mifandraisa amin'ny Vondrona KB
# 1 Fivarotana mikotrika amin'ny Internet
Rasta Robot - Fanabeazana kitapo
Serivisy hetsika Robotika
Drafitr'Andriamanitra ho an'ny tarika KB
© Kimroy Bailey Group of Company Incorporated. 2018. Zo rehetra voatokana
ANDRO / TRANO [Zone Time Zone]
Mon - Zoma / 8:00 PM - 5:00 PM CET
Ny vidiny rehetra dia voatonona ao amin'ny Dolara amerikana (USD). The Kimroy Bailey Group dia orinasa multibillion-dolara ary orinasa iraisam-pirenena Interactive Training, Business Process Outsourcing, Consultation and Software Development ho an'ny Orinasa Robestics nohavaozina. Ny Vondrona KB dia mampiditra am-pahatoniana ny famokarana angovo azo havaozina miaraka amin'ny Robotika sy ny fahiratan-tsaina. Ny vondrona KB dia miasa any Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, Miami ary Manchester. Raha manohy mitombo ny asantsika manerantany isika, ny tanjonay dia ny tsy hahatsapa hoe 'BIG', te hahatsapa ho toy ny orinasa kely manerana ny arabe izay ahafahanao mitsambikina ao amin'ny tranokalany ianao, manomboka resaka ary mahazo valiana haingana. Raha tsy azontsika ny valin'ny valiny eo noho eo, ny ekipanay dia mihaino fihainoana, azonao atao Mifandraisa aminay at [mailaka voaaro] Ny orinasa Kimroy Bailey dia an'i Kimroy, Sherika vadiny tsara tarehy sy ilay zanany mahafatifaty, Keilah Bailey. Ny Baileys 'mirehareha mino an'i Popsie (Andriamanitra) sy ny herin'ny Ràn'i Jesosy Kristy.
Lahatsoratra mahatalanjona avy amin'ny Multibillionaire Trott Bailey Family